Umsele: Linganisa Ukunakwa Komthengi Kuzo Zonke Iziteshi, Amadivayisi, Nezingxenyekazi | Martech Zone
I-Moat by Oracle iyi-analytics ebanzi neplatifomu yokulinganisa enikezela ngezixazululo kukho konke ukuqinisekiswa kwesikhangiso, izibalo zokunaka, ukufinyelela kwe-cross-platform nobuningi, imiphumela ye-ROI, nokumaketha nobuhlakani besikhangiso. I-suite yabo yokukala ifaka izixazululo zokuqinisekiswa kwesikhangiso, ukunakwa, ukuphepha komkhiqizo, ukusebenza ngokukhangisa, nokufinyelela kwepulatifomu nobubanzi.
Ukusebenza nabashicileli, ama-brand, ama-ejensi, namapulatifomu, i-Moat isiza ukufinyelela abathengi abazoba khona, ithathe ukunakwa kwabathengi, futhi ilinganise imiphumela yokuvula amandla ebhizinisi. Ukuhamba nge-Oracle Data Cloud kukunika amandla okuqhubekela emiphumeleni yebhizinisi engcono.
Bona ukubuka okuhlanganisiwe kweziteshi zemidiya
Thola ukusebenza komkhankaso wakho
Qonda ukuthi imiphi imidiya eqhuba ukuzibandakanya kakhulu
Thola ubuciko obuheha ababukeli
Funda ukuthi yimaphi amafomethi asebenza kangcono ebhizinisini lakho, usebenzisa izilinganiso zomkhakha
Nquma ukuthi ufinyelela izithameli ezifanele kumvamisa ofanele
Ukubuka konke kwezixazululo zeMoat
Enye yezinselelo ezinkulu ekukhangiseni ukukhomba imfucuza, kusuka ekukhangisweni okulethwa kubantu ababhekiswe kubo noma izikhangiso ezishaya izethameli ezifanayo kaningi kakhulu.
I-Moat Analytics idonsa imiphumela engcono yebhizinisi ngokuqinisekisa okunembile nokukalwa kokunakwa okuqinisa isu lakho lemidiya ledijithali.
Ukufinyelela Kwamanzi ihlanganisa ukufinyelela kwezinga lezithameli nemvamisa ukuthola ukubukwa kwepulatifomu yokuthi ufinyelela kubani ngezikhangiso zakho nokuthi ukuphi.
Umphumela WomseleIhlinzeka ngokubukwa kwesikhathi sangempela ekusebenzeni kahle kwesikhangiso ukuze ukwazi ukwenza izinqumo ezihlakaniphile, ezinolwazi mayelana nokuchitha kwemali kwesikhangiso sakho.
Imoat Pro ithuluzi lokuncintisana lobuhlakani elihlinzeka ukubukeka kwangaphakathi kuzikhangiso eziqondile nezinhlelo ezithengwa kumikhiqizo. Ngemininingwane esukela eminyakeni emithathu kuye kokusemakethe manje, ungasesha, uqhathanise, futhi ulandelele imikhankaso ngokuhamba kwesikhathi ukuqonda ukuthi isu lakho liqongelela kanjani izimbangi zakho.
Ngo-2017, i-Oracle ingeze iMoat kusethi yayo enamandla yezixazululo zobuchwepheshe bokukhangisa. I-Oracle inikeza idatha nobuchwepheshe ukuqonda nokufinyelela izithameli zakho kangcono, kujulise ukuzibandakanya kwakho, futhi ukukala konke ngeMoat.
Thola i-Moat Demo
Mayelana ne-Oracle Advertising
Ukukhangisa kwe-Oracle kusiza abathengisi ukuthi basebenzise idatha ukuthola ukunakwa kwabathengi nokushayela imiphumela. Isetshenziswa ngabakhangisi abangama-199 kwabangu-200 be-AdAge abangama-100, izixazululo zethu ze-Audience, Context kanye ne-Measurement zinabela kuzo zonke izinkundla zezindaba ezisezingeni eliphakeme kanye nomkhondo womhlaba wonke wamazwe angaphezu kwekhulu. Sinikeza abathengisi idatha namathuluzi adingekayo kuzo zonke izigaba zohambo lokumaketha, kusukela ekuhleleni kwezithameli ukuya ekuphepheni komkhiqizo wangaphambi kokubhida, ukubaluleka kokuqukethwe, ukuqinisekiswa kokubukwa, ukuvikelwa kokukhwabanisa, nesilinganiso se-ROI. I-Oracle Advertising ihlanganisa ubuchwepheshe obuholayo nethalenta ekutholakaleni kuka-Oracle kwe-AddThis, BlueKai, Crosswise, Datalogix, Grapeshot, neMoat.
I-Oracle inikeza ama-suites wezinhlelo zokusebenza ezihlanganisiwe kanye nengqalasizinda evikelekile, ezimele ku-Oracle Cloud.
Tags: ubuhlakani besikhangisochitha isikhangisoukuqinisekiswa kokuchitha isikhangisoukuqinisekiswa kwesikhangisoukunamathelaukuphepha komkhiqizoizibalo ezinqamulelayoimvamisa yesiphambanoukufinyelela kwepulatifomuIbhizinisiIzibalo zezikhangiso zebhizinisiukulinganisa ukuchitha isikhangisoumseleizibalo zomseleimiphumela yomseleumsele proumsele ufinyelelaomnichannelOracleifu ledatha le-oracleukukhangisa kwethelevishini